Anigu halis ma u ahay qaaxada – somali
Ma in aad ka baqdaabaa in aad qaado cudruka qaaxada? Waxa aanu u sheegi karnaa dadka inta badan eek ku noo Finland: sida badan uma baahnid in aad werwerto. Qaaxadu waa cudur aan aad caan u ahayn Finland. Intabadan dadkuna uma baahna in ay baqaan.
Dadka waqti ay wad noolaayeen qof qaba qaaxada sambabka ayaa ugu jir khatar in ay qaadaan qaaxada. Kooxdaas waxa ka mida dadka isla guri kuwada nool.
Waxa kale oo kordriya khatarta qaadista, masalan:
Miyaad ku noolayd wadan ay qaaxadu ku badantay?
Qaaxadu mayay ku badantay wadankaaga?
Miyaad ku noolay xaaado aad dad badan guri la deganayd?
Waa maxay xaalaad caafimaad iyo tan difacaaga jidhku.
Qaybtan wax aad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan kooxaha u nugul qaaxada iyo macluumaad ku saabsan qaaxda dadka qaaxootinimo isku dhiiba.